Adobe AIR | My Burmese Blog
Adobe AIR	On October 30, 2008	by Htoo Tay Zar	With	8 Comments	- Adobe	Adobe AIR ဆိုတာ Adobe systems ကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့ Rich Internet Applications အထူးသဖြင့် Desktop Internet Applications တွေ ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Cross-Platform Runtime Environment တစ်ခုပါ။ သူက Adobe Flash, Flex, HTML, Ajax, XML တို့ကို အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ AIR ကို ပထမတုန်းက Apollo လို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ Adobe Integrated Runtime (AIR) လို့ ပြောင်း ခေါ်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ထုတ်ထားတာက 1.1 (1.1.0.5790) ဖြစ်ပါတယ်။ Linux အတွက် alpha version ကို March 31, 2008 မှာ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။
Adobe AIR ဟာ Cross-Platform Runtime Environment ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ကို Windows, Mac OS X, Linux တို့မှာ .air ဖိုင်များနဲ့ အလွယ်တကူ run နိုင်ပါတယ်။ AIR က ဒေတာတွေကို server တင်မကပဲ local မှာ လဲ သိမ်းထားနိုင်တဲ့ အတွက် offline အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး online ပြန်ဖြစ်ချိန်မှာ ဒေတာ transfer အလိုလျောက်ပြန် လုပ်ပါတယ်။ Adobe AIR က layout အတွက် WebKit engine ကို သုံးထားပါတယ်။ WebKit က Safari နဲ့ Google’s Chrome တို့မှာ သုံးထားတဲ့ layout engine ပါ။ Development environment
HTML/Ajax, either via Adobe’s own Dreamweaver CS4, another HTML editor oranormal text editor in conjunction with the AIR SDK.
Flash CS4 Note ~
Adobe AIR ရဲ့ .air ဖိုင်က Microsoft က ထုတ်တဲ့ ဂိမ်း – simulator Flight Simulator X ဂိမ်းမှာပါတဲ့ .air ဖိုင်တွေ နဲ့ သွားတူနေတဲ့ အတွက် ဂိမ်းဖိုင်တွေကို Adobe air ဖိုင် အဖြစ် ပြောင်းပြ တတ်ပါတယ်။ ဒါကို Adobe forum မှာ ရှင်းပြထားတဲ့ နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ See also
Adobe ရဲ့ AIR လိုပဲ Mozilla က develop လုပ်နေတဲ့ Mozilla Prism ဆိုတာလဲ AIR လို Rich Internet Applications အတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပေ၇ာဂျက် တစ်ခုပါပဲ။
Adobe, Air	8 Comments	NL
Adobe AIR ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ ကြာပြီဗျ. နောက်ထက် အကျယ်တစ်ဝင့်
သွားလေ့လာနိုင်မဲ့ နေရာလေးတွေသိရင်လည်း ပြောပါအုံး .
Like or Dislike:00	NL
AIR အကြောင်းတွေ လေ့လာနိုင်တဲ့ Site လေးပါ ။ Function လေးတွေက
Web Designer တွေအတွက် လေ့လာထားသင့်တဲ့ Application လေးပါပဲ ။
Like or Dislike:00	Read Air | My Burmese Blog
[...] Air10th Anniversary ICT ExhibitionAdobe AIRDisasters Around The WorldUsing Numpad to Control Mouse PointerApple New MacBooks, Pro & [...]
NL @ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ကျွန်တော်လဲ အခုမှ စပြီး Air လေ့လာမလို့ပါ.. မကြာခင် ကျွန်တော် သိသလောက် tutorial ဆိုဒ်တွေ တင်လိုက်ပါ့မယ် ခင်ဗျ ကျေးဇူးပါ
Like or Dislike:00	Air iPhone | My Burmese Blog
[...] စမ်းလို့ ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ Adobe Air Application တစ်ခုပါ။ သူ့မှာ iPhone UI စမ်းလို့ [...]
Like or Dislike:00	My First MacBook | My Burmese Blog
[...] dashboard widgets, games တွေ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေတာပါ။ Adobe AIR တင်ပြီး app တွေလဲ သုံးပါတယ်။ TrackPad က Apple က [...]
Like or Dislike:00	Tweetie ~ Another twitter client for Mac | My Burmese Blog
[...] teaser video ကြည့်လို့ ရတယ်။ ပုံမှန် Adobe AIR based twitter client တွေနဲ့မတူပဲ Mac only အနေနဲ့ [...]
Like or Dislike:00	Download All Your PC Needs from Ninite | My Burmese Blog
[...] သွင်းရတဲ့ Acrobat Reader, Flash, Silverlight, Adobe AIR, VLC Player, Java, .Net Framework, Gtalk, iTunes စတာတွေကို [...]
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+5Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts
Having tea at street side tea shop, in front of British colonial era buildings... #Rangoon #Burma @… instagram.com/p/ZfYJRcwIxi/4hours ago
Model and the photographer 😁 beautiful Chin ethnic lady.... Umm sorry.. lady boy is here 😁👍✨✨✨ instagram.com/p/ZcZ-gWwI2N/ 1 day ago